Azerbaijan oo soo riday diyaarad Milateriga Ruushku leeyahay | Berberanews.com
Home WARARKA Azerbaijan oo soo riday diyaarad Milateriga Ruushku leeyahay
Azerbaijan oo soo riday diyaarad Milateriga Ruushku leeyahay
Azerbaijan-(Berberanews)-Gantaal ayaa soo riday diyaarad Helicopter ah oo Ruushku leeyahay oo ah nooca loo yaqaan Mi-24 oo dul heehaabaysa Armenia, meel u dhaw xadka ay la wadaagaan Azerbaijan, halkaas oo ay ku dhinteen laba ka mid ah shaqaalihii diyaaradda mid saddexaadna ku dhaawacmay.
Sida ay sheegeen militariga Ruushka Wasaaradda arrimaha dibedda ee Azerbaijan ayaa raaligalin siisay Ruushka, iyadoo sheegtay in qoriga loo yaqaan Mi-24 ay ciidamada Azerbaijan ku toogteen meel u dhow Nakhchivan si qalad ah.
Waxay ku soo beegantay iyadoo uu u dhexeeyo dagaal u dhexeeya Azerbaijan iyo gooni u goosatada Armenia. Ruushka wuxuu saldhig militari ku leeyahay Armenia, laakiin sidoo kale wuxuu xiriir adag la leeyahay Azerbaijan.
Toogashadu waxay ka dhacday meel u dhow Nakhchivan, oo aan u dhowayn iska horimaadyada hadda ka socda Nagorno-Karabakh.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Azerbaijan ayaa sheegtay in helikabtarka uu socday meel joog hoose ah saacado gudcur ah. Gantaal “Manpads” oo garabka laga rido ayaa soo riday, ayaa lagu yidhi warbixinta.
“Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidamada cirka ee Ruushka horay looma arag aagaas,” ayay wasaaraddu tidhi.
Azerbaijan waxay u tacsiyeysay qoysaska dadka la laayay, waxayna u fidisay inay bixiso magdhow. Qowmiyadaha Armenia ee ku dagaallamaya sidii ay gacanta ugu hayn lahaayeen Nagorno-Karabakh ayaa Isniintii qirtay in ciidamada Azerbaijan ay qabsadeen magaalo muhiim ah oo ku taal halkaas – Shusha (oo reer Armenia ugu yeedhaan Shushi).
Previous articleDonald Trump oo shaqada ka caydhiyay Xoghayihii difaaca
Next articleHuman right watch oo ku baaqday in Sucuudiga lala xisaabtamo